Ihe mere ihe omuma banyere ihe bu ihe bu ihe omuma nke SEO | Martech Zone
Monday, October 10, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ọ bụ ezie na anyị agbanweela atụmatụ dị iche iche nke ndị ahịa anyị iji mee ka ndị na-ege ha ntị nwee ike imeziwanye ihe na nsonaazụ Google na nsonaazụ ọchụchọ, otu atụmatụ anyị ahapụbeghị bụ ịmepụta infographics maka ndị ahịa anyị N'ezie, anyị na-abanye omimi… na-emepe emepe micrographics na animated elekọta mmadụ maka ha. Nke bu eziokwu bu na odighi ezi ihe nke ihe di nma - akacha nma, di nfe, izisa ozi ma mara mma. Ọ bụghị ihe ijuanya na 78% nke ndị CMO chere na ọdịnaya ọdịnala bụ ọdịnihu nke azụmaahịa ọdịnaya yana ozi nkọwa dị n'etiti nke a.
Infographics na-amasị ma na-akọrọ 3-ugboro karịa ụdị ndị ọzọ
SerpLogic etinyela ihe omuma a, Ihe kpatara Infographics Kwesịrị Partbụ Akụkụ nke Usoro SEO Gị, ma tinye usoro isii iji mepụta ihe ọmụma na-aga nke ọma:
Mata isiokwu na ndị na-ege gị ntị ga-enwe mmasị na ya. M ga-akwado nke ọma na ọ bụghị naanị ihe masịrị ya, mana isiokwu na-eme ka ụlọ ọrụ gị lelee anya dị ka ikike na oghere ozugbo ebipụtara.
Họrọ ụdị nke infographic, gụnyere static, ngagharị, ma ọ bụ mmekọrịta infographics ma ọ bụ njikọ ebe ahụ. Anyị na-ahụ n'anya ibipụta akwụkwọ akụkọ na akụkọ mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke na-adọta uche gaa na infographic zuru oke.
Isi iyi nke ọdịnaya na akara data maka infographic. Nnyocha mbụ na nke abụọ ga-enyere gị aka ịme ntụkwasị obi na ndị na-ege gị ntị. Nyochaa data ahụ dị ugbu a ma nwee aha ọma.
Mepụta imewe nke bara uru ma na-adọrọ adọrọ. Nke a bụ n'eziokwu ebe anyị na-ahụ ọtụtụ ndị na-ese ihe na-efunahụ akara ahụ. Ọdịdị mara mma nwere ike ịdọrọ anya, mana ọ bụ ikike nke onye mepụtara iji gosipụta akụkọ na-emeri ndị na-ege gị ntị.
Guzobe Atụmatụ Nkwado. Denye na blọọgụ gị, kesaa gafee mgbasa ozi mgbasa ozi, bido mkpọsa mgbasa ozi, dee maka blọọgụ dị mkpa, ma jiri mgbasa ozi na-akwụ ụgwọ na mgbasa ozi iji gbatịa iru ndị na-ege ntị.
Chọpụta Ndị Nkwado Ndị Nkwado Ndị Ọzọ. Jiri otu PR gị mepụta atụmatụ akwụpụtara nke na-eme ka itinye uche na ntinye ego nke itinye n'ọrụ.
Ezie na m hụrụ infographic n'anya, echere m na ha tufuru ihe kachasị mkpa… ịkpọ oku ime ihe! Ihe omuma ihe omuma gi gha eme ka ikike ma kerita ya n'etiti ndi na ege gi nti. N'ihi ya, ị ga-enwerịrị CTA na-enyo enyo bụ isi nke akwụkwọ ozi gị nke na-agbasawanye na isiokwu ahụ ma na-ebute njikọ gị na ụlọ ọrụ gị. Emela ihere - mee ka ndị mmadụ mara ihe ị nwere ike imere ha.
Tags: kpọọ ka emectaatụmatụ influencerAma ihe ngosiatụmatụ nkwalite infographicisiokwu infographicinfographics maka seoihe ngosiInfographics AhịaAserplogicụdị nke infographics